सिताराम कहो पट्टुको शैलीमा बोल्न थाले बालुवाटारका हनुमानहरु ! – eSajha News
सिताराम कहो पट्टुको शैलीमा बोल्न थाले बालुवाटारका हनुमानहरु !
प्रकाशित मिति: १२ कार्तिक २०७७, बुधबार १७:१८
– निमकान्त पाण्डे
भारतका गुप्तचर प्रमुख सामन्तकुमार गोयल यही कार्तिक ११ गते नेपाल आएर १२ गते फर्केपछि नेपालको राजनीतिमा निकै बहस चलिरहेको छ । एकदिने काठमाण्डौ बसाइका क्रममा गोयलले कस्लाई भेटे वा भेटेनन् भन्ने कुरा भन्दा महत्वपूर्ण पूधानमंत्री केपी ओलीसँगको गोप्य वार्ता किन ? र वार्तामा के कुरा भए भन्ने कुराको बिशेष महत्व रहन्छ । त्यसतर्फको चासाे कसैले देखाएका छैनन् । यस बिषयमा खासगरी सत्तासिन डबल नेकपाले नै चासो लिनु पर्ने हो । तर उस्ले चासो नलिए पछि सत्ता बाहिरका राजनीतिक दलहरुले यो बिषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्ने हो । सबै तैं चूप मै चूपको अवस्थामा छन् ।
भारतीय गुप्तचर प्रमुखको जहाज आउन लागेको जानकारी पर्यटन मन्त्रालयले उनी आउने दिन बिहान मात्रै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल कार्यालयलाई गराएको थियोे । त्यसैले यो भेटवार्ता पूर्व निर्धारित हो र आगमन अकस्मात जस्तो बनाइएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । आइएफसी ४६२० कलसाइनको जहाज सो दिन १ बजे काठमाडौं अवतरण गर्ने र अर्को दिन बिहान ९.४५ बजे फर्कने गरी फ्लाइट प्लान तय गरिएको थियो।
गुप्तचरका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा परिचयपत्रको रूपमा मतदाता परिचयपत्र देखाएका थिए । यसबाट अर्को रहश्य खुलेको छ कि गोयलको आगमन गोप्य राख्न खोजिएको थियो । आफ्नो सक्कली परिचयपत्र नदेखाउनुले गोयलको नेपाल भ्रमणलाई गोप्य राख्न खोजिएको थियो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । यसका साथै गोयलको सिधै र सहज रुपमा बालुवाटार प्रबेशले नेपाल सरकारको हैसियतलाई पनि कमजोर साबित गरिदिएको छ ।
छिमेकी देश भारत सरकारसँग नै नेपाल सरकारले बिबादित बिषयहरुमा कूटनीतिक र राजनीतिक रुपमा वार्ता गर्नुको सट्टा भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई प्रधानमंत्रीको सरकारी निवासमा स्वागत गरिनुले केपी ओलीलाई कुनै गम्भिर बिषयमा भारतको चर्को दवाव परिरहेको छ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । ओलीले सार्वजनिक नगरे पनि यस्ता बिबादित बन्न सक्ने भेटघाटलाई प्रधानमंत्री ओलीले सहजै स्वीकार गर्नुका पछाडि सामान्य कारण हुनै सक्दैन ।
भारतको गुप्तचर संस्थाका प्रमुख गोयल र अर्का अधिकारी अरुण जैनसहित नौजनाको टोली काठमाडौं आएको थियो । उनीहरूलाई लिएर आएको भारतीय एयरफोर्सको सैनिक जहाज अपराह्न १ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । गोयलले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग संवाद गरे । तर के सम्बाद गरे भन्नेबारे सरकारी निकायले कुनै जानकारी सार्वजनिक गराएको छैन ।
ओलीका बिश्वासपात्र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमंत्री शंकर पोखरेलले बुटवलबाट प्रधानमंत्री ओलीको बचाव गर्दै भारतीय प्रधानमंत्री मोदीको सन्देश लिएर गोयल आएको भनेर बोले पछि बालुवाटारमै प्रधानमंत्रीको उत्तराधिकारी बनेको भनेर प्रचार गर्दै स्वकीय सचिवको भूमिकामा जिम्मेवारी निवाह गर्दै आएका ईश्वर पोखरेलले पनि प्रधानमंत्री ओलीको बचाव गर्ने आधार पाए झैं गरी ‘सिताराम कहो पट्टु’ को शैलीमा शंकर पोखरेलकै दाबीलाई दोहा¥याएर मुख खोले ।
त्यसपछि बल्ल परराष्ट्रमंत्री प्रदिप ज्ञवालीले बोल्ने भेउ पाए झैं गरी निकै फूर्तिका साथ एउटा रेडियो सम्बादमा सिताराम कहो पट्टु भन्दै शंकरकै शब्द सापटी लिएर आफू कटुनीतिको बिद्वान नै भएको दाबी गरे । अन्तरवार्ता लिने पत्रकारलाई तपाई यत्ति पनि बुझ्नु हुन्न भनेर हप्काउन पनि भ्याए । यी तिनैजना ओलीभक्तहरुले ओलीका प्रेस सल्लाहकार मार्फत गोयलसँगको भेटवार्ताको औचित्यबारे प्रधानमंत्री अाेलीबाटै सार्वजनिक भैसकेको तर्फ ध्यान दिन सकेका रहेनछन् । तैपनि मुख्यमंत्री शंकर पोखरेलले प्रधानमंत्री र रअ प्रमुख बीचको भेटवार्तालाई सामान्य रुपमा लिएका छैनन् भन्ने कुरा उन्का शब्दबाट बुझ्न सकिन्छ । उन्ले भनेका छन् –नेताबाट धोका हुन्न भन्ने कुरामा बिश्वास गरौं । यो भनाईले नै दालमे कुछ काला है भन्ने कुरामा स्वयम् मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल नै सशंकित छन् भन्ने बुझिन्छ । परन्तु ईश्वर र प्रदिपले यो गम्भिर अभिब्यक्तितर्फ ध्यान पु¥याउने भेउ नै पाएका छैनन् ।
पौने १६ घन्टा काठमाडौं बसाइमा भारतीय गुप्तचरले क–कस्लाई भेटे भन्ने कुरा समेत गोप्य राखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाल लगायतलाई भेट्ने तालिका तय भएको समाचार बाहिरिएको थियो । तर सबैले भेट भएको भन्ने समाचारको प्रतिबाद गरेका छन् । गोयल भ्रमणको गम्भिरता कति छ भन्ने कुरा यसबाटै पनि स्पष्ट हुन्छ ।
सम्बन्ध बिग्रिएको देशको गुप्तचर संस्थाको प्रमुख सेनाको विमान चार्टर्ड गरेर नेपालका प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई भेट्न आएको विषय डबल नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरुका लागि सामान्य भैरहेको छ । सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराउँदा पनि यस्तै गतिबिधिहरु सिक्क्मिमा हुने गरेका ईतिहाससँग नैपालीहरु जानकार छन् , त्यसैले नै यस्तो चलखेलप्रति नेपालका देशभक्त नागकिहरुले सचेततापूर्वक ध्यान दिईरहेका छन् र भनिरहेका छन् –नेपालको हकमा यो भेटघाटलाई कुटनीतिक मान्न सकिदैन, यो दवावको भेटघाट हो । नेपालका कूटनीतिज्ञहरूले पनि यस्तो भेटवार्ता एउटा सार्वभौम देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण घटना भनेर टिप्पणी गरेका छन् । र्इतिहासको सिक्किम र आजको सिक्किमलाई हेरौं अनि सिक्किमका काजी लेण्डुपको अवस्थाबाट पाठ सिकेर सचेत बनौं र अगाडि बढौं ! अरु त के नै भन्न सकिन्छ र ? आगे देशभक्त कम्युनिष्टको आवरणमा सत्तामा पुगेका नेताहरुलाई चेतना भया ! –जनधारणा साप्तािहकबाट
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार १७:१८ मा प्रकाशित